ဘဝတစ်ခုအချစ်နေ့ဝယ် – Grab Love Story
ချစ်တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်နေတာ ပထမနှစ်ကနေ မတက်တော့မှာစိုးလို့ အတန်းတက်ချင်စိတ်များပြင်းပြစွာ ဖြစ်ပေါ်နေသောကာလ….. ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လောက် ရေးကြည့်ရင်း ပထမနှစ်ကနေ တက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် အနော် စာကြိုးစားနေပါတယ်……
အနော်ဇာတ်လမ်းရေးမယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က အကြောင်းလေးကို ဆင့်ပွားပြီး ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ရေးချင်လာတယ်…. ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်အခြေခံသော စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့ဗျာ……
စိတ်အစဉ်တို့က အတိတ်နေ့ကအကြောင်းပြန်ပြောင်းစဉ်းစားရင်း အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေမိတယ်…. မွန်နဲ့ ချစ်သူစဖြစ်တဲ့ နေ့မှာ အမှတ်တရဖြစ်အောင်ဆိုပြီး မေမြို့ ကို အစီအစဉ်မရှိဘဲ တက်ဖြစ်ခဲ့တယ်…. မန်းလေးနဲ့မေမြို့ဆိုတာ အဝေးကြီးမှ မဟုတ်တာပဲနော့်….. အဲဒီနေ့က မွန်က ရှပ်ပန်းရောင်လေး ဂျင်းပန်အနက်အောက်ရှူးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေခဲ့တယ်…. သူရကို ခေါ်မွန့်ကို ဝင်ခေါ်ခဲ့တယ်….မွန့်သူငယ်ချင်းဇာခြည်ကလည်း မွန့်အိမ်ကနေစောင့်နေတယ်လေ…(မွန့်အိမ်က အနော်တို့ဝင်လို့ထွက်လို့ရပါတယ်….. စတိတ်ကျောင်းကတည်းက ပေါင်းလာခဲ့သူတွေပဲလေ…..) မွန်ရယ် ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကွယ်….. လို့ ညီ့စိတ်ထဲမှာ တွေးရင်း ကားကို 78shopping mall သို့မောင်းလာခဲ့တယ်…. (အဲဒီအချိန်တုန်းက ၇၈မောမှာ KLCC ရှိသေးတယ်….) KLCC မှာထိုင်လို့ ကြက်ကြော်နဲ့ အအေးမှာစားကြရင်း မွန့်မျက်နှာလေးကို ညီငေးနေမိတယ်… မွန်… ဒီနေ့ညီ့ကိုအဖြေပေးမယ်ဆိုပေးတော့လေ…. ညီစောင့်နေရတာ လချီနေပြီ မွန်ရယ် ညီ့ကိုမနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့ လို့ မွန့်နားကပ်ပြီးတိုးတိုးလေး ဆိုလေတော့ မွန် ရယ်နေခဲ့တယ်…. ပြီးတော့ ညီ့ ကို တစ်ရှူးလေးတစ်ရွက်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်…. ညီကြောင်သွားပြီးမွန့်ကိုကြည့်တော့ အဲဒီထဲမှာ ရှာကြည့်လိုက်လို့ မွန်ကဆိုတယ်နော်…. တစ်ရှူးလေးက မွှေးလိုက်တာ ဘာတံဆိပ်လဲ… ညီ… ဒီလောက်မွှေးတဲ့ တစ်ရှူး မသုံးဖူးဘူးလို့ပြောတော့.. မွန်ရေမွှေးပုလင်းလေး တစ်ပုလင်းထုတ်ပြီး ညီ့အတွက်လို့ဆိုကာ ညီ့ကိုပေးတယ်…. မွန် တစ်ရှူးကို ရေမွှေးတွေဆွတ်ထားတာလား…. ဆိုတော့ ဟုတ်တယ်… ပြီးတော့ ဒီရေမွှေးပုလင်းလေးကလည်း ညီအတွက်တဲ့….
ဟား မွန်ကလည်း ညီကမွန့်ဆီက အဖြေတောင်းတာလေ… ရေမွှေးတာင်းတာမှမဟုတ်တာ…. မွန်ရယ်ပြီးပြောတယ်… သိတယ်လေ ညီဒီနေ့ကစပြီး မွန်ဝယ်ပေးတဲ့ရေမွှေးပဲ ဆွတ်တော့ ဟုတ်ပြီလား… အင်းပါမွန်ရဲ့ မွန်ဆွတ်ခိုင်းတဲ့ရေမွှေးပဲညီဆွတ်မယ်… မွန်ကတော့လေ အဖြေမပေးချင်တာနဲ့ပဲ ဝေ့နေပြန်ပြီ…. မွန်ထပ်ရယ်တယ်…. မွန့်သူငယ်ချင်း ဇာခြည်ကတော့ ညီ့ကို ဂျိုကြည့်ပြီးပြောတယ်… ဟရောင်ညီ… မင်းကို မွန်ကအဖြေပြန်ပေးနေတာလေ… မင်းကို သူပေးတဲ့ရေမွှေးပဲနေ့တိုင်းဆွတ်ခိုင်းတာက မင်းနားမှာ သူနေ့တိုင်းနေချင်တယ်လို့ပြောနေတာကွ မင်းကတော့လေ တုံးလိုက်တာ…. မွန်ကို မရမက အဖြေတောင်းတော့လည်းမင်း အဖြေပြန်ပေးတော့လည်း မသိတာက မင်းပဲတဲ့…. ဟားတကယ်လား မွန်… မွန်ညီ့ကိုအဖြေပြန်ပေးတာပေါ့ မွန်ရယ် ချစ်လိုက်တာ မွန်ရယ်… ဆိုတော့ သူရနဲ့ ဇာခြည်က တမင်ဖန်တီးယူထားတဲ့ချောင်းသံ နဲ့ချောင်းဆိုးပါတယ်… သူရက ဆက်ပြောတယ်.. မွန်က မင်းနဲ့ ချစ်သူစဖြစ်တဲ့နေမှာ မေမြို့က ပြည်ချစ်ဘုရားသွားဖူးချင်တာတဲ့… အဲဒါလိုက်ပို့လိုက်အုံးလို့ သူရကပြောတော့ ညီ မွန့်ကိုကြည့်လိုက်တယ်… မွန်ကလည်း ပြုံးကာခေါင်းကိုညိတ်ပြပါတယ်….
ညီနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ နေ့လည် ၁၁နာရီထိုးနေပြီ… ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မွန့်ကိုမေမြို့တော့ ဒီနေ့ပို့ရမယ်… ချစ်သူစဖြစ်တဲ့နေ့မှာ အမှတ်တရပေါ့….
ဘေလ်ရှင်းပြီးတော့ ကားသော့ကို သူရဆီ လှမ်းပေးလိုက်ရင်း သူရ ကားကို မင်းပဲမောင်းပေးတော့ကွာ ငါမွန်နဲ့ နောက်ခန်းက အတူတူထိုင်လိုက်ချင်လို့ ဇာခြည်လည်း
အရှေ့မှာပဲထိုင်ပေးကွာနော်လို့ ပူဆာတော့ ဇာခြည်က မွန့်ကို လှမ်းကြည့်တယ်… သူ့သူငယ်ချင်းကို ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ပေါ့…. မွန်ကလည်း အလိုက်သိပါတယ်…. ဇာခြည် သူရင်း ဟဲဟဲ လိမ္မာပါတယ်…. အရှေ့မှာ ထိုင်လိုက်နော်ဆိုတော့ ဇာခြည်က ဆူအောင့်အောင့်နဲ့ အေးပါအေးပါတဲ့…. ကားကပါကင်ရောက်တော့ ညီတို့၂ယောက် အနောက်ခန်းမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်…. သူရ ကလည်း မေမြို့တက်ဖို့ ၇၈လမ်းမကြီးကနေ သိပ္ပံလမ်းပေါ် ကို မောင်းလာခဲ့ပါတယ်…
မေမြို့တက်တဲ့ လမ်းမှာ မတ်တူး ကားလေးတစ်စင်း…. ကားထဲမှာ လူလေးယောက်… ကောင်လေး၂ယောက်နဲ့ ကောင်မလေး ၂ယောက် ထို့ထက်ပိုရှင်းအောင်ပြောပြရမည်ဆိုလျှင်…. အသစ်စက်စက်ပူပူနွေးနွေး ချစ်သူစုံတွဲ ၁တွဲ နဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်…. ၂၁မိုင်ရောက်တော့ ကြာဇံဟင်းလေးသောက် ခဏနားပြီး မေမြို့သို့ဆက်တက်ကြလေသည်ပေါ့…. မေမြို့ရောက်ရောက်ခြင်းပဲ မွန့်ဆန္ဒအရ ပထမ ပြည်ချစ်ဘုရားသို့သွားကာ ဦးခိုက်ကန်တော့ ဆုတောင်းကြပါတယ်….
မွန့်ဘေးနားမှာ ကပ်ထိုင်ပြီး အတူတူ ဘုရားကန်တော့ရတဲ့ အရသာကလည်း အထူးသား ဘုရားကန်တော့ပြီးတော့ မွန့်လက်ထဲက ပန်းလေးကို ဘုရားမှာကပ်ပေးရတဲ့ ပီတိ အတူတူ အလှူငွေထည့်ရတဲ့ ကြည်နူးခြင်း …. လောကကြီးက တကယ်လှပခဲ့ပါတယ်…..
ဘုရားဖူးပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာခြံကို သွားပြီး ကော်ဖီသောက်ကြ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြ…. စတော်ဘယ်ရီ သီးလေးတွေခူးစားကြနဲ့ ပျော်စရာပါပဲ…. မေမြို့ရောက်မှတော့ ကန်တော်ကြီးပန်းခြံထဲကို မရောက်ဖြစ်ရင်တော့ မမိုက်သေးဘူးလေ… အဲဒီတော့ ကန်တော်ကြီးထဲကိုသွားကြတာပေါ့…. ချစ်သူ့လက်လေးကို ဖွဖွကိုင်လို့ ပန်းခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်ရတဲ့ ဖီးလ်ကလည်း လူကိုမြောက်စေတယ်လေ…. ရွှံညွန်တောလျှောက်လမ်းကိုသွားတဲ့ ဝါးရုံတောနားရောက်တော့ လူသူလေးပါးကင်းရှင်းတာနဲ့ မွန့်ပါးလေးကို ခပ်ဖွဖွ အနမ်းလေးခိုးပေးတော့ ရှက်သွားတဲ့ မွန်မျက်နှာကြည့်ပြီး ပီတိဖြာမလို့လုပ်နေတုန်း သာသနာဖျက် ၂ကောင်ကြောင့် ပီတိမဖြာလိုက်ရပေ…. ဒါကို သူရက စလိုက်ပါသေးတယ်… အနော်တို့က ကလေးတွေဆိုတော့ ရှက်တတ်တယ်… နောက်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်နမ်းပါအုံးတဲ့…. ဇာခြည်ကတော့ ဘောက်ဆက်ဘောက်ဆက်နဲ့ ထွက်သွားတယ်… မွန်ကပြောတယ်… ညီကွာ မဆိုးနဲ့တဲ့… သူရနဲ့ ဇာခြည်နဲ့ထွက်သွားပြီးတော့ ရွှံညွန်တောလျှောက်လမ်းဘက် လိုက်မသွားဘဲ နတ်ရေကန်ဘက် ပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်… ဒါမှ ချစ်သူလေးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်မှာလေ…. နို့မို့ သကောင့်သား ၂ယောက်ကို ကြည့်နေရအုံးမှာ… နတ်ရေကန်ဘက်ရောက်တော့ လူရှင်းတာနဲ့ မွန့် ပါးလေးကို တစ်ခါထပ်နမ်းရင်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုပါ ဆွဲနမ်းလိုက်တယ်… မွန်က ရှက်ပြီး ဇွတ်ထွက်ပြေးသွားတယ်ဗျာ… နေနှင့်အုံးပေါ့မွန်ရာ လို့ စိတ်ထဲက ကြုံးဝါးရင်း မွန့်နောက်ကို လိုက်လာခဲ့တယ်… ဟုတ်ကဲ့ ပုံမှန်ဆိုရင် ဧရိယာပြင်ပပဲရောက်နေတတ်တဲ့ ဖုန်းက ဝင်လာပါတယ်.. သူရတို့ဆီကပါ… ညီတို့ပျောက်သွားလို့တဲ့ …. ကားပါကင်ဘက်လာခဲ့တော့လို့ ခေါ်လိုက်ပြီး မန်းလေးကို ပြန်ဆင်းလာခဲ့ ကြတယ်…. မန်းလေးပြန်ရောက်တော့ ည ရနာရီတောင် ထိုးပေါ့.. မွန့်တီတီရဲ့ ဆုံးမစကားများတော့ နားဆင်လိုက်ရတယ်….
မရေးတာကြာနေပြီ အခု ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ထားပေးလိုက်တော့ ရေးကိုရေးရတော့မယ်လို့ ကျောင်းတော်ကြီးက ပြောနေသလိုခံစားနေရတာမို့း)
အဆူခံထားရတာမို့ အိမ်တွင်းပုန်းမမလေးလုပ်နေတဲ့ ချစ်သူ မွန်လေးကို အပြင်ခေါ်ထုတ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတယ်ပေါ့ အမေရိကားကို အပြီးပြောင်းသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မန်းလေးကို အလည်ပြန်လာတုန်း ငယ်သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး မေမြို့ညအိပ်တက်မယ်လို့မွန်က သူအိမ့်ကိုခွင့်တောင်းတယ် အစက သူအိမ်ကမလွှတ်ချင်ဘူး နောက်မှ ခွင့်ပြုတယ် အဲတော့ အားလုံးမေမြို့ကို ဒိုးကြသည်ပေါ့ sweety land hotel မှာတည်းကြတာပေါ့ အဲဒီဟိုတယ်က ဘန်ဂလိုလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ မိုက်တယ် လူစုကများတော့ လေးခန်းယူပြီးမျှအိပ်ကြတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ဘယ်ရမလဲ အနော်က လူလည် တစ်ခန်းသက်သက်ကို သယ်ငယ်ချင်းတွေမသိအောင် ပိုယူထားလိုက်တာပေါ့း) လည်တဲ့အကြောင်းတွေခနနားပြီး ည ၇ နာရီလောက် ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်ဗျာ
ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တော့ ခနနားကြတာပေါ့ ရေချိုးတဲ့သူကလည်းချိုးပေါ့ ၈ နာရီခွဲလောက်ကျ ဘန်ဂလိုရှေ့လေးမှာ ခုန်လေးတွေထုတ်ပြီး မေမြိုညမှာ မေမြို့က မက်မန်းဝိုင်းကို မလိုင်လုံးနဲ့မြည်းရင်း ဂစ်တာတီးသီချင်းဆိုရတာ တကယ့်ဖီးလ်ပဲလေ
ချစ်သူမွန်လေးက ကျနော့်မျက်လုံးထဲမှာတော့ အလှဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့ ချစ်သူရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေက အနော့်ကို လာနမ်းပါလို့ခေါ်နေသယောင်ယောင် ဖွံ့ထွားတဲ့ရင်နှစ်မွာကလည်း ကျနော့်ရင်ကို ကလူ၏သို့ မြူ၏သို့နဲ့ စစ်ကြေငြာနေတယ် သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ရဖို့ ဘယ်လိုခွင်ဖန်ရမလဲပေါ့ မျက်လုံးပေါင်း နှစ်ဆယ်လောက်ကို ဖြတ်ဆကျာ်ရမဲ့အပြင် ချစ်သူကိုပါ ကိုယ့်ဘက်ပါအောင်မြှူဆွယ်ရအုံးမှာလေ ကျားတို့မာယာနဲ့ပေါ့း)
ယမကာပါတဲ့ဝိုင်းဆိုတော့ ဘယ်လိုပဲတောင့်ခံပါစေ မူးသူတွေကမူးနေကြပြီမို့ အခန်းထဲလိုက်ပို့ ရေချိန်မကိုက်သေးလို့ကျန်ခဲ့တာ ညီရယ် ချစ်သူရယ် နောက် သူရတို့အတွဲရယ်ပေါ့ဗျာ သူရတို့အတွဲကလည်း ဘယ်အချိန်ကတည်းက ဂွင်ရှာနေလဲမသိဘူး ကျနော့်ကိုလာပြောတယ် ညီ မင်းခုနက တစ်ခန်းပိုယူထားတယ်မလား ငါ့ကိုအဲဒီအခန်းပေးကွာဆိုပြီး သူရကလာညှိတယ် ညီလည်းညာလို့မရမှန်းသိတော့ အေးလို့ခေါင်းညိတ်ရတာပေါ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ သူရတို့က တစ်ခန်းအိပ်ရင် ညီနဲ့ ချစ်သူမွန်လည်းအလိုလို တစ်ခန်းအိပ်ရတော့မယ်လေ ကျန်တဲ့ ၃ ခန်းမှာ ၂ ခန်းက ယောက်ျားလေးတွေ မိန်းကလေးခန်းကလည်း ၃ယောက်ဖြစ်နေပြီ ညကြီးမှ extra bed လည်းထိုးခိုင်းလို့မကောင်းတော့ဘူးလို့အကြောင်းပြရတယ် မွန့်ကိုလေ 😛 မွန်ကအစက လက်မခံချင်ဘူး ခက်တာက သူရစော် နွယ်နွယ်ကလည်း သူရနဲ့ပဲအိပ်ချင်တယ်လို့ဆိုလာတော့ မွန်လည်းဘယ်ငြင်းသာတော့မလဲလေ 😛 ဒီကကောင်ကတော့ ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျတာပေါ့
သူရတို့အတွဲ အခန်းထဲဝင်သွားတော့ အပြင်မှာ ညီတို့နှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တော့တယ် မွန်အနားတိုးကပ်ပြီး မွန် အပြင်မှာအေးနေပြီ ကိုတို့လည်းအခန်းထဲဝင်ကြရအောင်လေဆိုတော့ မွန်က လေသံတိုးတိုးနဲ့ အင်း တဲ့လေ ကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်က မိန်းမနဲ့မကင်းပေမဲ့ မွန်အပေါ်မှာကျတော့ တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ် တကယ်ရင်ထဲက ချစ်မြတ်နိုးရသူမို့ထင်ပါရဲ့
အခန်းထဲရောက်တော့ မွန်က ညဝတ်အင်္ကျီလေးယူပြီးရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတယ် မွန် ရေမချိုးနဲ့တော့လေ ဆိုတော့ မွန်က ပြန်ပြောတယ် ညဝတ်လဲမလို့ ပါတဲ့ အော် အင်းအင်းဆိုပြီး ညီတို့နှစ်ယောက်လုံး စကားသံတိတ်သွားတယ် မွန်လည်းရေချိုးခန်းထဲက အဝတ်လဲပြီးထွက်လာတော့ ညီ ညဝတ်မလဲသေးဘူးလား လဲတော့လေ ဆိုမှ အဝတ်လဲဖို့သတိရတော့တယ် အဲဒါနဲ့ အဝတ်လဲမယ်ဆိုပြီး အင်္ကျီချွတ်လိုက်တော့ မွန်ရှက်သွားတယ် ညီရေချိုးခန်းထဲသွားလဲလေတဲ့ ရတယ် ဒီမှာပဲလဲတော့မယ်ဆိုပြီး ဆက်လဲနေတော့ မွန်ဘာမှ မပြောတော့ဘဲ ညီကိုကျောပေးပြီး ရပ်နေတယ် အစကတော့ ဘယ်လိုဘယ်ဝါဆိုပြီး ကြံစည်ထားပြီးကာမှ တကယ်တန်း နှစ်ယောက်အတူ တစ်ခန်းထဲလည်းရောက်ရော ရင်ထဲမှာ တော်တော်လေးဆူနေတယ် ဒါပေမဲ့ အပြင်မှာတော့ ဘာမှမလုပ်မိသေးဘူး
ဘာမှသာမလုပ်ရသေးတာ ညီရဲ့ ညီတော်မောင်ကတော့ ခေါင်းထောင်ချင်နေပြီ ညီလည်းမထူးပါဘူးဆိုပြီး ဝတ်ထားတဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်တော့ ညီတစ်ကိုယ်လုံးမှာ အဝတ်ဆိုလို့ underware ပဲကျန်တော့တယ် အဲဒီအချိန်မှာပဲ မွန်ကလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ညီမပြီးသေးဘူးလားဆိုပြီး ခေါင်းလှည့်လာတော့ အို လို တစ်ချက်ရွတ်ပြီး ညီ့ကို ကြောင်ကြည့်နေတယ်
အဲဒါနဲ့ညီလည်း မွန်ပုခုံးလေးကို ဆွဲလှည့်ပြီး အရမ်းနမ်းချင်နေတဲ့ မွန်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ဆွဲယူစုပ်နမ်းနေလိုက်တယ် ခနတော့ မွန်အငိုက်မိပေမဲ့ ညီရင်ခွင်ထဲကနေ မွန်ရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် ညီလည်းမွန့်ကို ရုန်းထွက်ခွင့်မပေးဘဲ မွန့်ရဲ့ ညဝတ်အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ပြီး မွန်ရဲ့ ဘရာလေးကိုပါ ချိတ်တွေဖြုတ်လိုက်တော့ မွန်ရဲ့ နွေးထွေးအိစက်နေတဲ့ နို့လေးတွေကို ညီလက်နဲ့ပွတ်သပ်ချော့မြှူလိုက်တယ် မွန်က ညီလက်ကိုဖယ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အားတော့မပါဘူးလေ မွန်ရဲ့ အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့ ဘောင်းဘီလေးကိုပါဆက်ချွတ်လိုက်တယ် မွန်အတွင်းခံဘောင်းဘီဝတ်မထားဘူးပဲ
ညီ မွန့်ကိုချစ်ရင်ဒီလိုတွေဆက်မလုပ်ပါနဲ့နော်တဲ့ မွန်ကပြောလာတော့
ကို မွန်ကို ချစ်လို့ပါ မွန့်ကို ချစ်ပါ့ရစေကွာ ကို့ကို သနားပါအုံး ကို့ညီလေးခမျာ ဘောင်းဘီထဲမှာ ကြပ်နေပြီ မွန်ရယ် လို့ပြောပြီး မွန်လက်လေးတွေကို ယူပြီး ညီရဲ့ ပါးပြင်းထောင်နေတဲ့ ဖွားဖက်တော်ပေါ် မွန်လက်လေးကို အုပ်ကိုင်ပြီးခပ်ဖွဖွ ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်
မရှက်ပါနဲ့မွန်ရယ် ကိုတို့ကချစ်သူတွေပဲ ကိုတို့ယူမယ်ဆိုလည်း ကိုတို့အိမ်တွေက သဘောတူမှာပဲလေမွန်ရဲ့ ကို့ ကို မရှက်နဲ့နော် ကိုတို့ချစ်ကြရအောင်နော်မွန် လို့ ထပ်ပြောလိုက်တော့ မွန်လေ ကျနော်ကို ကြည့်ပြီး ရှက်ပြုံးလေးနဲ့ဖြေတယ် အင်း တဲ့ မွန်လက်က အခုတော့ ညီက ပွတ်ချုင်းစရာမလိုဘဲ ပွတ်ပေးနေပြီ ညီလည်း ကျန်နေသေးတဲ့ ဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်လိုက်တော့ မွန်ခမျာ ညီရဲ့ တောင်နေတဲ့ ဖွားဖက်တော်ကိုကြည့်ပြီး အကြီးကြီးပဲတဲ့ ညီလည်းမွန့်လက်ကို ဖွားဖက်တော်ပေါ်တင်ပေးပြီး ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ပေးပြီး ကို့ကို ဒီလိုလေးလုပ်ပေးနော်မွန် ဆိုတော့ မွန်က ဘာမှပြန်မပြောပေမဲ့ ညီလုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်ပေးပါတယ် ညီလည်း မွန်နို့လေးတွေကို ပြန်ကုန်းစို့လိုက်တော့ ယားတယ် ညီရယ် တစ်မျိုးကြီးပဲ တဲ့လေ
မွန်နို့သီးထိပ်လေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ လျက်လိုက်မနာအောင်ခပ်ဖွဖွလေးကိုက်လိုက်လုပ်ပေးနေရင်းလက်တစ်ဖက်ကလည်း တခြားနို့အုံလေးကိုဆော့ပေးနေတဲ့အပြင် ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့လည်း မွန်ဖင်လုံးလုံးလေးကို ပွတ်ပေးနေတော့ မွန်လည်းဖီးလ်တွေတက်ပြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ပေါ့ :-* မွန်ကို ခုတင်ပေါ်လှည်းချလိုက်တော့ မွန်ရှက်နေတယ် ချစ်တယ်မွန်ရယ် ဆိုတော့ ကိုရယ်တဲ့
ခုတင်ပေါ်ရောက်တော့လည်း မွန်နို့လေးတွေကိုစို့ပေးလိုက် ဗိုက်သားလေးတွေက်ုပွတ်လိုက်လုပ်ရင်းကနေ ညီ့လက်ခလယ်နဲ့ မွန့် ညီမလေး (မွန့်ရဲ့ အဖုတ်ဝလေး) ကို ကလိလိုက်တော့
ညီ အ အ ယားတယ် တဲ့ ညီလည်း မွန့်နို့လေးတွေစို့ရင်းကနေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မွန်ဗိုက်လေး ဗိုက်နားလေးကတဆင့် မွန့် ရဲ့ အမွှေးရေးရေးလေးတွေပေါက်နေတဲ့ အဖုတ်လေးကို နမ်းလိုက်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ကို ငရဲကြီးလိမ့်မယ်တဲ့ ကျနော်လည်းဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲ မွန့်ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားထဲ ခေါင်းဝင်လိုက်ပြီးတော့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် လျှာဖျားလေးနဲ့ ဆွဲလိုက်တော့ မွန်ဆီက အီး ဆိုတဲ့ ညီးသံလေးနဲ့အတူ မွန်ဖင်ကြီး ကြွတက်လာတယ် ကျနော်လည်း မွန် အဖုတ်လေးကို လျက်လိုက် အစိလေးကို စုပ်ပေးလိုက်နဲ့
ပြွတ် ပလပ် ပလပ်
အ အ အီး အီး
ကောင်းလား မွန်လို့မေးတော့ ကောင်းတယ် ကို ရယ် ဆက်လုပ်ပေးပါ အရမ်းကောင်းတာပဲ တဲ့
အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း မွန် အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် လျှာဖျားလေးနဲ့ ထိုးလိုက်
အစိလေးကို ခပ်ဖွဖွလေး ဆွဲစုပ်လိုက် အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ငုံပြီး ဆွဲစုပ်လိုက်နဲ့လုပ်ပေးနေလိုက်တယ်
အ အ ကို ကို ကောင်းကောင်းလိုက်တာ လို့ပြောပြီး မွန်ကိုယ်လေး တုန်တုန်သွားတယ် ကျနော်သိလိုက်ပြီ မွန်တစ်ရောက်တော့ ကျနော့် လျှာစွမ်းနဲ့ တစ်ချီ ပြီသွားပြီပေါ့
ကျနော်မွန်ကို ဘာဂျာကိုင်ပေးနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီ မွန် ကို
“မွန့်ကို လုပ်ပေးတာ ကောင်းလား “
“အင်း အရမ်းကောင်းတာပဲ ကိုရယ် “
“ကို အခုမွန်ကို လျှာနဲ့လုပ်ပေးတာကို ဘယ်လိုခေါ်လဲသိလား “
“မွန် အဲဒါ မွန့်ကို ဘာဂျာမှုတ်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်”
“ကို ကွာ မညစ်ပတ်နဲ့”
” မွန် ကို့ တောင်နေတဲ့ ကိုဟာလေးကိုရော ကိုမွန့်ကို လုပ်ပေးသလို လုပ်ပေးပါလား”
” ဘယ်လို လုပ်ပေးရမှာလဲ လုပ်ပေးမယ်လေ”
” မွန် ကို့ ဒစ်ထိပ်ေံးကို စစုပ်ပေးလေ” မွန်စကားပြန်မပြောပေမဲ့ မွန်နှုတ်ခမ်းလေးတွေက ကျနော့် ဒစ်လေးကို စစုပ်နေပြီ
” အား ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် မွန်” မွန်သေချာမစုပိစ်တတ်သေးပေမဲ့ ကိုယ့် ချစ်သူက စုပ်ပေးတာခံရလို့လားမသိဘူး ဇယားတွေနဲ့ လုပ်ရတာထက်ကို ပိုကောင်းနေတယ် မွန် စုပ်ပေးနေတာကို ကြည့်ရင်း သြော် ငါ့ကိုာချစ်ရှာသားပဲ လို့တွေးနေမိတယ်
“မွန် လက်တစ်ဖက်နဲ့ လွတ်နေတဲ့ ကို့ ဒုတ်နေရာလေးတွေကို ပွတ်ပေးပါလား” လို့ပြောပြီး မွန့် လက်ကို ဒုတ်မှာထားပေးလိုက်တော့ ကျနော်ပြောတဲ့ အတိုင်း လုပ်ပေးနေတယ် ဒါပေမဲ့ မွန်က မကျွမ်းကျင်တော့ စုပ်တာ အားများပြီး လူက ပြီးချင်လာတယ်
“မွန် ဖယ်လျုက်တော့ ” လို့ ပြောတော့ မွန်က အလန့်တကြား
“ဘာလို့လဲ ကို မွန်လုပ်ပေးတာ မကောင်းလို့လား ” လို့မေးပြီး ဆက်စုပ်ပေးနေတော့ ပိုပြီးအားပါလာတော့ ကျနော်လည်းထိန်းမထားနိုင်တော့ဘဲ ထုတ်လိုက်မိတယ် ကျနော့် သုတ်ရည်တွေထွက်သွားပေမဲ့ မွန်က မရပ်သေးဘ ဆက်စုပ်နေသေးတယ်
” အ အား မွန် ကို ပြီး ပြီးပြီ” လို့ပြောမှပဲ မွန်က စုပ်တာကို ရပ်ပြီးကျနော့်ကို ပြန်မေးတယ် ကောင်းလားတဲ့
ဒီတစ်ခါ ကောင်းတယ်လို့ဖြေရတာ ကျနော့်ဖြစ်သွားတာပေါ့
” မွန် ကို့အရည်တွေကို ဘာလို့ မထွေးဘဲမြိုချ လိုက်တာလဲ”
” ကို ကောင်းနေတာ ပျက်သွားမှာစိုးလို့”
” မွန်ရယ် ” လို့ပြောပြီး ကျနော် မွန်ကိုယ်လေးကို ဖက်ပြီး မွန်အပေါ်တက်ခွပြီး မွန်တစ်ကိုယ်လုံးကို နေရာလပ်မကျန်အောင်ကို နမ်းပစ်လိုက်တယ် မွန်ဖင်လေးတွေ ပေါင်တံလေးတွေပါမကျန်ပေါ့ မွန်ခမျာလည်း တဟင်းဟင်းနဲ့ကောင်းနေတာပေါ့
နမ်းပြီးတာနဲ့ မွန်ပေါင်လေးနှစ်ချောင်းကိုထောင်ကားခိုင်းလိုက်ပြီး မွန် အဖုတ်ဝလေးကို ကျနော့် ဒုတ်နဲ့ ကလိပေးလျုက်တော့
“ယားတယ် ကိုရယ် ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ” တဲ့ ကျနော်လည်း ဒုတ်ကို ကိုင်ပြီး မွန့်အဖုတ်လေးထဲ တဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်းလိုက်တယ်
မွန့် အဖုတ်လေးကစီးပြီးကြပ်နေတာပဲ အားနည်းနည်းထပ်စိုက်ပြီး သွင်းလိုက်တော့
” အား နာတယ် ကို “
” ခနပါ မွန် ခနနေကောင်းသွားမှာနော်” လို့ချော့ပြီး ထပ်အားစိုက်ပြီးသွင်းလိုက်တော့ ဒုတ်အဆုံးထိ ဝင်သွားတယ် မွန်ရဲ့ အားဆိုတဲ့ အော်သံနဲ့ အတူပေါ့ ” ကိုမကောင်းဘူးကွာ နာအောင်လုပ်တယ် အခုအောင့်တယ်” လို့မွန်ကငိုမဲ့မဲ့လေးနဲ့ပြောလာတော့
မွန့် ကိုလေးပေါ်ထပ်အိပ်လိုက်ပြီး မွန်နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းလိုက် နားရွက်လေးတွေကို နမ်းလိုက် မွန့် လည်တိုင်လေးတွေကို နမ်းလိုက်လုပ် ပေးနေတော့ မကြာပါဘူး မွန် ဖင်လေးက အောက်ကနေ လှုပ်လှုပ်ပေးလာတယ်
အခန်းထဲမှာတော့ မွန့်ရဲ့ ဖီးလ်တက်နေတဲ့ အသံလေးတွေနဲ့ အဖုတ်နဲ့ ဒုတ် အချစ်ပြင်းပြင်း ဝင်ထွက် မိတ်ဆက်နေတဲ့ အသံလေးတွေပဲရှိတယ် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတော့ ငြိမ်သက်လို့
“အ အ အင်းအင်း “
” ဖွတ်ဖက် ဖွတ်ဖက်”
“အားအား ရှီး အ အ”